Inotapira uye inonaka. Imwe yeakanakisa akawanikwa emakore ekupedzisira emakore aya akanyanya kuputa Nero ave mumwe weanonyanya kufarirwa waini. Vatengi vazhinji vanotiudza iyi ndiyo yakanakisa waini yavakamborara. Iko kusanganiswa kweiyo yakasviba yakasviba michero chokoreti inosvuta nekunetseka kwakapusa kunoita kuti ichi chibatirwe chisina kurapwa.
Yakatsvuka zvakadzama ruvara ine hints ye violet. Iyi bouti yakaoma inopa zvinonhuwira zvinodziya, cocoa, kofi, doro uye michero yakaomeswa berry. Yakanyorova uye yakashambidzika palate, iyo yakazara-yakagwinya Canace ine yakatsva acidity kubva kuAglianico, yakaenzanirana neaneti tannins uye inorembera zvinonhuwira.
Rakasiyiwa pamuti kuti riome zvishoma, mazambiringa ewaini iyi haana kukohwiwa kusvika kutanga kwaNovember, achimupa hunhu hwakasimba uye hwakagadzirwa hunyanzvi. Kusviba, doro-rakasvibira michero yesango remunhuwi pamwe menthol uye blueberry zvinyorwa, zvingave zvekurapa. Iyo yakapfuma chaizvo palate ine plummy, flavor flavours, macerated dema cherries uye kunyange hint yeinectarine pakupedza. Chaicho chakanaka uye chakaoma asi chinoda chikafu kuti chiratidze pazvinogona.